Ninka ugu taajirsan Vietnam wuxuu leeyahay qorshe lagu badbaadiyo Dunida Virus-ku ku dhacay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Ninka ugu taajirsan Vietnam wuxuu leeyahay qorshe lagu badbaadiyo Dunida Virus-ku ku dhacay
Jebinta Wararka Safarka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan • Wararka Jabinta Vietnam
COVID-19 coronavirus badanaa wey booday Vietnam dalka gudahiisa waxaa laga soo tabiyay kaliya 332 xaaladood mana jiraan wax dhimasho ah. Laga soo bilaabo xaruntiisa fidsan ee Hanoi, ninka ugu taajirsan Vietnam, bilyaneerka Pham Nhat Vuong, wuxuu arki karaa baahi ka baxsan xadka. Bishii Abriil, ninka ugu taajirsan Vietnam wuxuu sahamiyey isku-duubnidiisa ubadkiisa-ilaa-qabri wuxuuna qaatay go'aan. Wuxuu galayay hawo-qaadeyaasha.
Xaaladaha ugu xun ee COVID-19, fayrasku wuxuu weeraraa sambabaha, taasoo adkeyneysa in oksijiin lagu daro dhiigga. Hawo-mareenka ayaa noqon kara farqiga u dhexeeya nolosha iyo dhimashada, mana ku filna. Hal qiyaas, cusbitaalada adduunka ayaa isticmaali kara 800,000 oo kale.
Yaraanta ayaa ugu daran adduunka soo koraya - Koonfurta Suudaan, tusaale ahaan, waxay leedahay 4 hawo-hawo oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 12 milyan, laakiin waddanka adduunka ugu qanisan wuu gaaban yahay, sidoo kale. Ka dib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in qaar ka mid ah cusbitaalada magaalada New York ee sida aadka ah u waxyeellooba ay leeyihiin hawo qaboojiyeyaal ku xeel dheer inay u adeegaan 2 bukaan isla waqtigaas, Madaxweyne Donald Trump wuxuu ku qasbay baabuurta sameeyaha iyo shirkadaha kale ee Mareykanka inay bilaabaan sameynta aaladaha. Ford Motor Co. iyo General Electric Co. waxay iska kaashadeen inay keenaan 50,000 hawo bixiyaha ugu dambeyn 13-ka Luulyo qandaraas dowladeed oo dhan $ 336 milyan.
Vuong wuxuu rumeysan yahay in shirkaddiisa, Vingroup JSC, ay ku qaban karto si dhakhso leh iyo lacag ka yar. Iyadoo la adeegsanayo naqshad il furan oo ka socota qalabka sameeyaha Medtronic Plc, Vingroup waxay soo gudbisay hawo shaqeeysa si loo ansixiyo jaangooyada bartamihii Abriil. In kasta oo shirkaddu sugayso xakamaynta Vietnam si ay u bixiso tallaabada hore, hawo-qaboojiyeyaashu way ka baxayaan qadka shirarka.
Qalabka neefsashada ee Vingroup wuxuu ku kacaa qiyaastii $ 7,000 gudaha Fiyatnaam, 30% wuxuu ka yar yahay nooca Medtronic u gaarka ah. Shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay inay soo saari karto ugu badnaan 55,000 bishiiba isla marka ay dowladdu oggolaato iyaga oo qorsheynaya inay u dhoofiso meel kasta oo dalab ka jiro. Vingroup waxay sheegaysaa inay kumannaan kun ugu deeqi doonto Ukraine iyo Ruushka, halkaas oo Vuong uu ku leeyahay xiriir ganacsi oo soo jireen ah.
“Waqtigan xaadirka ah, waxaan diirada saari doonaa soo saarida hawo badan - oo aan si fiican u qabano,” ayuu yiri Vuong oo 51 sano jir ah, kaasoo la wadaagay qorshihiisa dhowr bilood intii lagu jiray wareysi dhif ah oo ka dhacay xarunta Vingroup ee Hanoi. iyo taxane emayl ah. "Waxaan dooneynaa inaan gacmaha is qabsano dowlada Vietnam si loo xaliyo qeyb ka mid ah dhibaatada safka faafa."
Halka Vingroup ay gacanta ku hayso isbitaalo iyo xarumo caafimaad oo faro ku tiris ah; ahaanshaha soo saaraha qalabka caafimaadka kuma jirin ajandaha. Laakiin Vuong, oo markii ugu horreysay hodan ku noqday iibinta baastada baakadaha ku duugan ee Yukreeniyaan, ayaa caan ku ah himilo ka timaada tii Vietnam. Marka, markii waddanku ku riixay soo saarayaasha gudaha si ay u soo saaraan alaabooyin casri ah, Vingroup waxay bilowday sameynta gawaarida iyo taleefannada casriga ah.
Hadda, maaddaama ay dowladdu u siineyso kiisaska wajiga-in-Vietnam wajiga wajiga looga dhigo waddamada fayrasku ku dhacay waddamada dibedda, Vuong waxay ka dhigeysaa hawo-qaadeyaasha qayb ka mid ah xitaa olole caalami ah oo hami weyn leh: iibinta gawaarida Vietnamese adduunka.
Hoggaamiyeyaasha Vietnam, Vuong iyo Vingroup waxay markhaati u yihiin horumarka waddanku ka sameynayo dhaqaalaha hantiwadaagga illaa kan ku wajahan suuqa. Dawladdu waxay bogaadisay kobaca iyo guusha Vingroup oo qayb ka ah casriyeynta Vietnam.
Hawl wadeenada hawada ayaa laga yaabaa inay cadeeyaan hordhaca istiraatiijiyadeed ee suuqa adduunka. Haddii Vingroup ay soo jiidan karto wax soo saarkii miisaanka Vuong, waxay wax ka qaban doontaa yaraanta adduunka, iyada oo ka faa'iideysanaysa magaca 'Medtronic' oo ah qalab sameeye caafimaad oo si fiican loo aasaasay. Haddayna hawo-qaadeyaashu u shaqeeyaan sidii loogu talo galay, Vingroup waxay cadeyneysaa awooddeeda ay ku gaarsiin karto qalab qalafsan, la isku halleyn karo, oo nolosha lagu badbaadiyo - ma ahan xumaan wanaagsan oo loo fidiyo gaari sameeyaha doonaya
Shirkaddu waxay qaabeysay safkeedii ugu horreeyay ee hawo-mareenka muddo ka yar hal bil, iyadoo loo habeeyay 3 saf oo suumanka xambaarsan ee warshaddeeda casriga ah ee 7-bil jirtay. Injineerada ka socda qeybta baabuurta ee VinFast ee shirkada ayaa ka shaqeeyay nashqadeynta aalada, wakiilo ka socda Medtronic ayaa la talinaya shaqaalihii sameenayay taleefannada casriga ah iyo TV-yada isbuucyo ka hor.
"Waxaa jira shirkado aad u tiro yar oo adduunka oo kale ah," ayuu yiri Mark Mobius, oo ah aasaasaha Mobius Capital Partners LLP. Wuxuu maal gashi ku sameynayay Vietnam tobankii sano ee la soo dhaafay wuxuuna ku leeyahay maalgashi gaar ah qaran. Hamiga waa yaab. Waxay noqon laheyd guul weyn - in Vietnam laga dhigo ciyaaryahan caalami ah. ”
Ka sokow, wuxuu furay hudheelka ugu horreeya ee Vietnam, Vinpearl Resort & Spa oo ku yaal Hon Tre Island, oo ay ku xiran tahay gondola 2-mayl magaalada xeebta Nha Trang. Barxadaha waxaa ka mid ah baarkinka ugu horreeya ee biyaha ee Vietnam iyo koorso golf-18-god ah.
Nenden R. Rukasah ee Vinpearl Hotels & Resorts waxay ogeysiineysaa in Vietnam ay kor u qaaday 22 maalmood ee dardaaranka bulshada ee Abriil 23, 2020. Inta badan meheradaha iyo adeegyada oo ay ku jiraan hudheelada iyo goobaha dalxiisyada ayaa loo oggol yahay inay dib u bilaabaan ganacsiyadooda. Intii ay ka hadlaysay howlaha dalxiiska ee mustaqbalka dhow, Rukasah wuxuu yiri: “Markii shirkadaha duulimaadyadu ay dib u bilaabaan duulimaadyadoodii caalamiga ahaa, dadku waxay si tartiib tartiib ah u bilaabi doonaan safarka ganacsiga iyo fasaxyada.
In kasta oo la filayo in dadku ka fogaan doonaan safarka meelaha dhaadheer iyo meelaha aadka u saameeya bilowga. Sidaa awgeed, ahaanshaha a safar gaaban oo loo aado Hindiya oo saameyn yar ay ku yeelatay COVID-19 waxay ka dhigeysaa Vietnam meel khatar yar loo safri karo oo aan ka aheyn Mareykanka iyo Yurub. ”
Noocyada hawo qaadista ee 2-da Vingroup waxay la kulmeen heerarka farsamo ee ugu horreeyay, tijaabooyin caafimaadna waa socdaan, sida uu sheegayo Nguyen Minh Tuan, oo madax ka ah waaxda Wasaaradda Caafimaadka ee maamusha hawo-wadayaasha. Wuxuu yiri Vingroup waa inuu helaa ogolaansho si loogu soo saaro hawo-mareenada marba marka natiijooyinka tijaabooyinka bukaan socodka ay yimaadaan bishaan.
Vuong wuxuu leeyahay sicirka hadda ee hawo-mareenada uu kayaryahay inta ay ku kacayso sameynta. "Ujeedada wax soo saarka hawo qaadashadu waa mid gebi ahaanba ku saabsan ka qayb qaadashada bulshada waqtigan xasaasiga ah," ayuu yiri Sidoo kale waa ku meel gaar. "Ma lihin qorshayaal aan ku ballaarinno qaybtaan."
Vuong wuxuu cadeeyaa inuu yahay wadani wax walba ka sareeya, wuxuuna sheegay inuu doonayo in shirkadiisu ay sii wadato inay ku darto liiska ugu horeeya ee Vietnam. “Marwalba waxaan usheegaa asxaabteyda: yaanan noloshaada haku dhaafin micno la’aan,” ayuu yiri. “Ha u oggolaan in ay ahaato in dhamaadka noloshaada, aadan haysan wax u qalma in la xasuusto ama dib loo sheego. Waxay noqon doontaa dhammaad xun in la arko in noloshaadu aysan wax qiimo ah soo kordhin. ”